‘अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्छ’
संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुअघि अलि कस्सिएर लागेको भए एउटा परिस्थिीत खडा हुन्थ्यो । अब प्रस्ताव गइसकेको छ । यसले एउटा उल्झन खडा गरेको छ । यसबाट कसरी उम्कने भन्ने कठिनाइ छ । अहिले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेको पास गर्नका लागि हो । पास गर्नका लागि संसद्मा अनुकूल परिस्थिीत बन्नुपर्छ । त्यसका लागि समय आइसकेको छैन । हामीले मधेसी दललाई ‘संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन पनि प्रयास जारी राखौं र सँगै निर्वाचनमा समेत जाऔं, त्यसले अनुकूल वातावरण बनाउँछ’ भनिरहेका छौं । चुनावमा सबै होमिँदा देशमा एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण बन्छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्छ । तर, माघ ७ आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहको चुनाव गराउने वातावरणसमेत बनेको छैन । सरकारले जेठ १५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्दै आए पनि दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधानको संशोधनबिना चुनाव बहिष्कार गर्ने र एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुको संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानको चेपुवामा परेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेससहित सबै ठूला दलको सत्ता स्वार्थले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गराउनुबाहेकको विकल्प नरहेको पौडेलको निष्कर्ष छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेता पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन । सरकारसहित प्रमुख दलहरू निर्वाचन गराउने त भन्ने, तर सहमतिको वातावरण बनाउन अल्मलिइरहेका छन् । कतै आगामी वैशाख–जेठभित्र हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावै टर्ने त होइन ?
निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावले अप्ठ्यारो पारेको छ । वास्तवमै संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउँदा अलिकति हतारो भएकै हो । मधेसी मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सरोकारवाला जिल्ला (सीमा हेरफेरको प्रस्तावमा परेका जिल्ला) का अगुवाहरूसँग प्रस्ट कुराकानी गरीकन प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो । दुई/चार दिन हतार नगरेको भए धेरै कुरा मिलेर अघि बढ्न सक्थ्यो । कुरा काँचै राखेर प्रस्ताव अघि बढ्दा जतासुकै भड्कियो । मधेस केन्द्रित दलहरू परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै छन् । संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी मत भएका एमालेसहितका दलहरू यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिन्नौं भन्दै छन् । सरोकारवाला जिल्लाहरूमा पनि असन्तुष्टि छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन किन हतार गरेजस्तो लाग्छ ?
शेरबहादुर (देउवा) जी र प्रचण्डजीलाई कतैको ‘प्रेसर’ पर्‍यो होला । मेरो विचारमा मधेसलाई मिलाइहाल्छौं भन्ने पनि पर्‍यो होला । तर, मधेसलाई मिलाइहाल्न त्यति सजिलो थिएन । हिसाबकिताब नगरीकन हामी त दुई तिहाई पुर्‍याइहाल्छौं नि भन्ने ‘ओभर कन्फिडेन्स’ भएजस्तो लाग्छ । मधेसी मोर्चाको पनि कुरा के हो प्रस्ट छैन । यही संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि पनि उहाँहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । उहाँहरूले त ‘यो पुग्या छैन, ऊ पुग्या छैन’ भनेर अझै ‘बार्गेनिङ’ को ठाउँ राख्नुभएको छ । त्यसैले पनि यो संशोधन प्रस्तावले कसैलाई पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन । यो हतारको निर्णयले स्वयं सरकारलाई बढी असजिलो परेको छ ।
यही कारण निर्वाचन टर्न लागेको निष्कर्षमा पुग्नुभएको त हैन ?
चुनाव त कुनै पनि हालतमा टर्नु हुन्न । देशलाई चुनावमा नलैजाने हो भने यत्रो लामो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपक्षेतालगायतका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले आगामी माघ ७ सम्म तीनै तहका निर्वाचन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अब चुनाव नगर्ने भनेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा नलैजानु हो । संविधान कार्यान्वयनमा नआउँदा संघीयता पनि जान सक्छ । संघीयता कहाँ रहन्छ ? समावेशिता पनि गोलमाल हुन्छ । गणतन्त्र पनि के हुन्छ ? लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ? यी सबै धरापमा पर्छन् । यो यथार्थ किन मधेसकेन्द्रित दलहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? मैले मधेसी दलका नेताहरूसँग पनि भनिरहेको छु, सानोतिनो हात, बित्ता र आँठो किलोमा अड्केर यत्रो ठूलो उपलब्धिलाई खतरामा पार्ने ? यो कुनै बुद्धिमानी होइन । तपाईंहरूको मनसाय के हो भनेर मैले बारम्बार मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छु ।
संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा अलिकति हतारो भएकै हो ।
वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
एमाले र मधेसी मोर्चाको कसरी मिलन भएको हो, थाहा भएन ।
सत्ताको कुरा सभापतिजीले जान्नुहोला, मेरो कुरा– हामीलाई चुनाव चाहिएको छ ।
संसद्को म्याद थप्ने दिशातिर राजनीति गयो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।
आउँदो चुनावमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
देउवा सभापति भएपछि कांग्रेसको कतै पनि केही अभियान छैन ।
कतै संघीयतामै नजाने प्रयत्न पो सुरु भएको हो कि ?
त्यो हो भने पनि खुलेआम आउनुपर्‍यो । किन जनता र देशलाई दु:ख दिने ? यदि त्यही बाटो हो भने संघीयतालाई हटाइदिऊँ भन्ने कुरा आउन सक्नुपर्‍यो । त्यसको विकल्पमा के चाहेको हो, त्यो पनि आउनुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने कुरा ठीक हुन्न । अनावश्यक रूपमा देशले दु:ख पाउने काम भयो । यहाँ ठूलो नारा र आकर्षक कुरामा परेर नेपाली जनताले धेरै दु:ख पाएका छन् । सात दशकदेखि नेपाल अलमलमा परेको छ । नेपाल सीधा बाटो समातेर जान नसक्दा झन्डै एउटै समयमा आएको परिवर्तनले हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले कति उन्नति गरिसके ? हामी किन जहाँको तहीँ छौं ? यसमा सबैले जिम्मेवारबोध गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय माग्दै आएको छ । तर, दलहरूबीच अहिलेसम्म स्थानीय तह या निकाय– केको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ । यस्तो हिसाबले जेठ १५ भित्र कसरी स्थानीय चुनाव सम्भव देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगलाई सरकारले ‘गो अहेड’ भनेर चिठी दिएको छ । पहिला वैशाखभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिएको थियो । फेरि जेठ १५ सम्मको समय पुर्‍याइएको छ । यो के हो बुझ्न सकिएको छैन ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ ?
त्यही भएर वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दा निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुने तर मधेसी मोर्चासँगको बैठकपछि फेरि ‘यू–र्टन’ देखिने– यस्तो किन भइरहेको ?
प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले यो गाँठोमा तपाईं किन फस्दै आउनुभएको छ भनेर भन्दै आएको छु । एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन पास हुन दिन्नँ भन्ने, मोर्चा संविधान संशोधन नगरी हामी चुनावमा जान्नौं भन्ने । प्रधानमन्त्रीचाहिँ मधेसी मोर्चाले सहमति नदिई चुनावको घोषणा नै गर्दिनँ भन्ने । यसले हामी अड्कोमा परेका छौं भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले सरकारलाई असहयोग गरेको रूपमा बुझ्नुभयो । यो अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीजीले आँट गर्नुपर्छ ।
सरकारले स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नगर्दै निर्वाचन आयोगले कसरी चुनावको तयारी थाल्न सक्ला ?
जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता पहिला हुनुपर्‍यो । प्राथमिकतामा चुनाव पर्नेबित्तिकै पुन:संरचना प्रतिवेदनले जुन खालको समस्या पैदा गरेको छ, त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ भने तत्काल हल गरौं । हल गर्न सकिँदैन भने केको निर्वाचन गर्ने, त्यसको निर्णय गरौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सबभन्दा पहिला संस्था नै गठन भएको छैन । गठन आदेश चाहियो । संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना हुनुपर्‍यो । त्यो गर्न नभ्याउने हो भने पुरानै संरचनाको निर्वाचन गरौं । संक्रमणकालीन अवधिका लागि पुरानै संरचनाको निर्वाचन गर्दा पनि हुन्छ । यसमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि मैले ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा आउँछौ भन्ने हो भने तयार हुनुहोस्’ भनेको छु । उहाँहरू पनि आउँछु भनेजस्तो गर्ने, तर खुलेर नभन्ने गर्नुभएको छ । यसरी सबैले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झिलिमिली झिलीमा पार्न भएन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका गर्न खोजेकै हो । तर, तालमेल मिलिरहेको छैन ।
तपाईंले भनेझैं स्थानीय तहको निर्वाचन झिलिमिलीमा रुमल्लिएको हो भने अब के गर्ने ?
त्यसले संविधान संशोधन पारित गर्न र सुधार गर्नका लागि पनि सबैतिरबाट सजिलो परिस्थिति बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले हिजै (शुक्रबार) मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
त्यो गर्दा त भ्याइँदैन । संविधान संशोधनमा अघि बढ्दा धेरै समय लिन्छ । प्रक्रिया धेरै लामो छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित एक तिहाईभन्दा बढी सांसद विपक्षमा छन् । एमालेसहितलाई मिलाएर संशोधन प्रस्ताव पास गर्नका लागि त समय लाग्छ । पास नगरीकन निर्वाचनको मिति तोकिँदैन भन्ने हो भने समयले भ्याइँदैन । चुनावको समय घर्काउने कुरा हुनु हुँदैन ।
तपाईंको भनाइ ‘स्थानीय तह’ को निर्वाचन सम्भव छैन, पुरानै ‘स्थानीय निकाय’ को चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हो ?
नयाँ संरचनामा जानुपर्छ भन्नेहरूले सबै विवाद मिलाएर पनि निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो कि त पुरानै संरचनाको निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्‍यो ।
कतै प्रमुख दलहरू स्थानीय निर्वाचन नगरी एकैचोटि केन्द्रीय निर्वाचनतिर जान खोजिरहेका त हैनन्, आशंका यस्तो पनि छ नि ?
यो अर्को गलत कुरा हो । केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गरेर तलदेखि माथिसम्मको प्रणाली बन्न सक्दैन । केबल सरकार बन्ने र सरकारमा गएर रमाउनेबाहेक केही हुन्न । प्रधानमन्त्रीकै कुर्चीलाई हेर्ने मात्रै कुरा हुन्छ, सिंगो व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम हुन्न । हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्थातिर नलगेर फेरि पनि काम चलाउन र झारा टार्ने व्यवस्थातिर सीमित रहने कुरा आउँछ । समग्र संसद् बन्न पनि सक्दैन ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाले एकैचोटि केन्द्रको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा छ नि ?
मधेसी मोर्चाको र एमालेको पनि त्यस्तै कुरा सुनेको छु । यो व्षियमा एमाले र मोर्चाको कसरी मिलन भएको हो, मलाई थाहा भएन ।
कांग्रेस पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै लागेको हो भन्ने पनि छ नि ?
गाउँको विकास गर्न र बजेटको सदुपयोग गर्नका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो । सत्ताको कुरा सभापतिजीले जान्नुहोला, मेरो कुरा– हामीलाई चुनाव चाहिएको छ । देशलाई चुनावमुखी बनाउनुपर्छ । सकारात्मक र विकासको बाटोतिर नेपाललाई लैजानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।
प्रमुख दलहरूबीच कसको नेतृत्वमा चुनाव हुने भन्ने विषय नमिल्दा निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातवरण बन्न नसकेको हो कि ?
त्यो अर्को पाटो हो । राष्ट्रिय निर्वाचन गराउने बेलामा कसको नेतृत्व सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ, त्यसमा खुलेरै छलफल हुनुपर्छ । सहमतिबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । सहमतिबिना अघि जाँदा अहिलेको संक्रमण पार गर्न कठिन हुन्छ ।
संक्रमण पार गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ । त्यसका लागि मिहिनेत गर्न आवश्यक छ ।
तपाईंले नै विवादित सबै मुद्दाको समाधानका लागि प्याकेजमै सहमति गरौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यो प्याकेजभित्र सरकारको कुरा पनि पर्छ ?
पहिल्यैदेखि मैले व्यवस्थाका लागि सहमति गरौं, सत्ताका लागि नअल्झिऔं भन्दै आएको थिएँ । तर, घुमिफिरी सत्ताकै विषयमा कुरा अघि नबढाई अरू विषयमा सहमतिमा नआउने पार्टीका नेताहरूको मनोदशा मैले देखें । त्यसकारण ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेर नै सत्ताका लागि मिलाएरै भए पनि व्यवस्थाको स्थायित्व गरौं, सत्ताका लागि पनि कुरा गरौं, विवादित विषयमा पनि सहमति गरौं भनेको हुँ । ७० वर्षदेखि अलमलिएको देशलाई नयाँ ढंगले प्रणालीमा लगेर विकासको बाटोमा जाऊँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो ।
समय हुँदासम्म दलहरू सहमतिका नाममा अल्झिरहने, माघ ७ पछि संसद््को म्याद थप्ने तयारी भइरहेको त होइन ?
राजनीति संसद्को म्याद थप्ने दिशातिर गयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । यो गर्नु ठूलो बदमासी हो । यसले खराब नजिर बसाल्छ ।
त्यो सम्भावनातिर जान लागेको हो ?
अहिल्यै त त्यस्तो निचोड निकाल्न मिल्दैन । तर, त्यस्तो सोच कसैले राखेको छ भने देशका लागि राम्रो हुन्न । यसले अविश्वास अझ बढाउँछ । दलहरू र राज्य प्रणालीप्रति आम मानिसको विश्वास हराउँछ ।
मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने कांग्रेसको पनि निष्कर्ष हो ?
हुँदै हुँदैन भनेर त्यसरी बस्नु हुन्न । केही पार्टीहरूले अड्डी लिए भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुन्न । सल्लाहमा नआउने, एकपछि अर्को अड्डी र अड्को थाप्दै जाने हो भने राष्ट्रमा चुनाव नै हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकको बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
एमालेले त अहिले संसद्मा दर्ता भएकै संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आएको छ । यस्तो प्रस्ताव किन ल्याउनुभएको ?
राष्ट्रियताको नारा मात्रै ल्याएर हुँदैन । एमालेले उठाएको राष्ट्रियता भनेको एउटा वर्गको मात्रै हो । यस्तो कुराले राष्ट्रियता बलियो हुन्न । राष्ट्रियता बलियो बनाउन त हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर देशभित्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । त्यो सोचाइमा कांग्रेस छ । त्यसैले मधेसको मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईंहरूले अघि बढाएको प्रदेशको सीमाकंन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने एमालेको दाबी छ नि ?
त्यस्तो होइन । जिल्लाहरूलाई चित्त बुझेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रका जनताका बीचमा पनि असन्तुष्टि छ । जति गृहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको पक्कै हो । तर, यति भन्दैमा कसलाई कहाँनेर सुविधा पर्छ र कसलाई असुविधा पर्छ भन्दैमा राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन । जनतालाई चित्त बुझाउनका लागि अझै छलफल गर्न सकिन्छ ।
तीन तहको निर्वाचन गर्न अब ११ महिनामात्र बाँकी छ । यो अवधिमा तीनवटै निर्वाचन हुनसक्नेमा शंका उब्जेको छ । अबको ११ महिनामा तीनवटै चुनाव सम्भव देख्नुभएको छ ?
अझै पनि अन्योल चिरिन सकेको छैन । यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र हामीले पाएका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ ।
कांग्रेस संगठनभन्दा सत्ताको राजनीतितिर बढी केन्द्रित हुन थालेको गुनासो छ नि ?
हो, सत्ताप्रति बढी केन्द्रित हुँदा या सत्ता केन्द्रित मानसिकता र लोभले गर्दाखेरि हाम्रो मूल उद्देश्य छायामा परेको हो । सत्ताकै लागि चिन्ता बढी गर्दा, कोही रिसाउँछ कि भनेर सोच्दा संविधान कार्यान्वयनको मूल ध्येयलाई असर पर्ने काम हुनु चिन्ताको विषय हो ।
अलिकति प्रसंग बदलौं, कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । तर पार्टीका विभाग र समितिहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । यो कुरा कांग्रेसभित्र किन उठिराखेको छैन ?
शुद्ध मनको कुरा हो । पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई मैले भेटेरै ‘तपाईं एकीकृत कांग्रेसको पार्टी सभापति भइहाल्नुभयो, तीनचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईंलाई के चाहियो ? सिंगो कांग्रेसलाई एक बनाएर लैजानेतिर तपाईं जानुभयो भने तपाईंलाई पनि राम्रो हुन्छ, पार्टीलाई पनि । सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्नुहोस्, त्यसमा मेरो हरेक पाइलामा सहयोग हुन्छ’ भनेको हो । तर, आफ्नो र अर्काको भावना राखेर काम गर्न थालेको आभास भएको छ । यसरी काम गर्न थालेपछि निर्णय लिन पनि गाह्रो हुन्छ । निश्चित मापदण्ड, प्रक्रियालाई समातेर निर्णय गरेको भए अस्ति नै टुंगिन्थ्यो । त्यस्तो नभएका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्यो । कांग्रेसका लागि प्रतिस्पर्धा बाहिर छ, भित्र होइन । मैदानमा अरू पार्टीहरू छन । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका सानातिना मतभेदहरूलाई पन्छाएर सिंगो पार्टीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ सभापतिज्यूले ।
कांग्रेसमा झनै भागबन्डाको संस्कृति मैलाउँदै गएको छ नि ?
सुरक्षाको प्रश्न सबैलाई छ । जीवनभर संघर्ष गरेका र लडेका साथीहरू कांग्रेसमा छन् । एकतर्फी र एक थरीे मान्छेको मात्रै हालीमुहाली र सुरक्षा भयो भने अरूको मनमा के भावना उब्जन्छ ? त्यसलाई सोच्नुपर्छ । सबैलाई पद दिन सकिँदैन । तर, आश्वस्तता त चाहियो नि । सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ नि ।
देउवाको एक वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
जति हुनुपथ्र्यो, भएको छैन । पहिला पार्टी हारेको थियो । म उपसभापति हँ‘दा नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत जुन अभियान चलाएँ, त्यसले पार्टीको पक्षमा एउटा जागरण पैदा गर्‍यो । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला अलमलमा हुँदा पनि पार्टीलाई देशभर परिचालन गरेको थिएँ, जसले गर्दा कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन मद्दत गरेको हो । देउवा सभापति भएपछि कांग्रेसको कतै पनि केही अभियान छैन । कुनै सशक्त कार्यक्रम पनि छैन । त्यसले गर्दा आउँदो चुनावमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७३ ०७:४३
सरकारी अस्पतालका शौचालय छिर्नै सकिन्न
अस्पतालभित्रै कर्मचारीले चलाउँछन् सशुल्क शौचालय
माघ २३, २०७३ फातिमा बानु
काठमाडौं — उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालका शौचालय फोहोर र दुर्गन्धले छिर्नै सकिँदैन । अस्पतालभित्रका शौचालय सफा नहुँदा बिरामी र कुरुवा सकस खेप्न बाध्य छन् ।
वीर र पाटनको मानसिक अस्पतालका शौचालय छिर्नै नसकिने अवस्थामा छन् । ढोकैसम्म दिसापिसाब छरिएको देख्न सकिन्छ । वरपर हिँडदासमेत नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ । प्रसूति गृह थापाथली र टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जका शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ । ती शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ला भनेर सकेसम्म शौच नगरी बस्ने गरेको, आपतै पर्दा मात्रै प्रयोग गर्ने केही बिरामी र कुरुवा बताउँछन् ।
पाटन अस्पतालमा गत एक महिनादेखि दाजुको उपचार गराउँदै आएका कुरुवा माधव भट्टले भने, ‘शौचालयमा कहिल्यै पानी हुँदैन, सफा पनि गरिएको हुँदैन, छिर्नै घिन लाग्छ ।’ भित्रको शौचालय प्रयोग गर्नुभन्दा पैसा तिरेर बाहिरको सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेको उनले बताए । अर्का कुरुवा ढुन्डीराज नेपालले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्छु, सकेसम्म पिसाब रोकेरै बस्ने गरेको छु, असाध्यै घिन लाग्छ ।’ प्रसूति गृहमा जति फोहोर हुँदा पनि बिरामीले भित्रकै शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताए । ‘जहाँ गए पनि सरकारी अस्पतालमा यस्तै हो, अब त बानी परिसक्यो,’ प्रसूति गृहमा भेटिएका एक कुरुवाले भने ।
वीरमा भेटिएका अधिकांश कुरुवाले बाहिरको सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेको बताए । साताको दुईपटक पतिको डायलोसिस गर्न आउने अनामनगरकी रुबी केसीले भनिन्, ‘नाकमुख थुनेर शौचालय छिर्छु, बान्तै होलाजस्तो हुन्छ ।’
यसैबीच अस्पतालभित्रको शौचालय फोहोर भएकै कारण पाटन र टिचिङ परिसरभित्रै छुट्टै सार्वजनिक शौचालय पनि सञ्चानलमा छन् । अधिकांश बिरामी कुरुवाले ५ रुपैयाँ तिरेर परिसरभित्रको शौचालय प्रयोग गर्ने बताए । यी शौचालयहरू अस्पतालकै कर्मचारीहरूले चलाएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्की सरुवा रोगको प्रमुख स्रोत फोहोर शौचालय हुने बताउँछन् । ‘अस्पतालमा अनेक रोगका बिरामी आउँछन्, उनीहरूको दिसापिसाबबाट स्वस्थ व्यक्तिमा पनि रोग सर्छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालको शौचालय फोहोर हुनुलाई सामान्य ढंगबाट लिनु हुँदैन, महामारी फैलिन सक्छ ।’ मानसिक अस्पतालका सूचना अधिकृत वासुदेव कार्कीले पाटन क्षेत्रमै पानीको समस्या भएकाले शौचालयमा पानी नभएको बताए । उनले टयांकरको पानी किनेर भए पनि शौचालयमा व्यवस्था गरिने बताए ।
प्रसूति गृहका निर्देशक अमिरबाबु श्रेष्ठले भने शौचालय प्रयोग गर्नेहरूकै कारण फोहोर भएको बताए । ‘आफूले सफा गर्नुपर्ने होइन भनेर जथाभावी दिसापिसाब गरिदिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने । वीरमा भने ढल भरिएकाले जति सफा गर्दा पनि शौचालय फोहोर हुने र अहिले ढल व्यवस्थापनको काम चलिरहेको अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतले बताए ।